China API610 VS1 Pump VTD Model mpanamboatra sy mpamatsy | damei kingmech pump
Type VS1 pump dia lavaka mando, paompy diffuse casing tokana mijanona miaraka amin'ny fivoahana amin'ny tsanganana araka ny API 610.
Size: 4-32 santimetatra
Fahafahana: 100-10000m3 / h
Fitaovana: vy vy, SS304, SS316, SS316Ti, SS316L, CD4MCU
Ity paompy API610 VS1 ity dia fitaovana pumping vaovao novolavolainay miorina amin'ny haitao mandroso manerantany.
Satria ny fifamoivoizana rehetra amin'ity paompy ity dia manaraka tsara ny fenitra API610, ity paompy mifangaro afovoan-tany tokana (dingana roa) ity dia manana kalitao tena tsara sy azo itokisana tokoa, mety tsara hampitana rano amina paikady amin'ireo herinaratra sy vy anidina ao ny zavamaniry vy. Ankoatr'izay, azo ampiharina amin'ny fanamboarana sambo, fitsaboana rano, fanariana maloto ary fanondrahana fambolena.
Ny endri-drafitry ny paompy API610 VS1 Pump
1. Ity fitaovana pumping ity dia mankafy ny tahan'ny fikorianan'ny rano, ny lanja maivana ary ny toerana fametrahana kely kokoa .Mety azo atomboka mivantana izany ary tsy mila mampiditra rano ao aminy ny mpampiasa.
2. Ankafiziny ny fahombiazan'ny fandidiana avo izay manomboka amin'ny 80% ka hatramin'ny 89%.
3. Amin'ny fikaohon-kazo ambany dia ambany kokoa, ity paompy ity dia manana fiainana serivisy lava kokoa, azo antoka sy azo antoka.
4. Ity paompy afovoan-tany API610 ity dia mety tsara hitsinjara rano madio sy ranomasina
Temperature ambany noho ny 85 ℃。
5. Fitaovana fampifandraisana ho an'ny paompy sy ny motera. Fototra tokana: ny roa dia apetraka amin'ny fototra iray ihany. Fototra roa: mifototra amin'ny fototra izy ireo. Ny famoahana an'io paompy io dia apetaka amin'ny fotony na eo ambanin'ny fotony.
6. Ny fitoeran-tsigara ho an'ity paompy mifangaro ity dia ny dobo sendra azy. (Arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa, azonay atao koa ny manome paompy maodely iray izay ny tanky fisotroany dia lavaka maina)
Previous: Paompy API610 BB5 (DRM)
Manaraka: Model6Y LYD Pump6 API VS4 Pump